समाचार - कसरी धूलो सor्कलनकर्ताको लागि धुलो ब्यागलाई द्रुत रूपमा बदल्ने?
सामान्यतया, धुलो हटाउने धुलो झोला बिस्तारै पहिरिन थाल्छ, र धुलो ब्याग लगाउनुको मुख्य कारण धुलोको पीसउने बल हो। थप रूपमा, त्यहाँ फिल्टर सामग्रीको खराबी र उच्च तापक्रमले रासायनिक पदार्थको क्षतिको कारणहरू पनि छन्।
जब धूलोको पीसने बल धेरै बलियो हुन्छ वा धुलोले केही हदसम्म जम्मा गर्दछ, धूलो झोलाको तल झर्ने गर्दछ। थप रूपमा, फिल्टरिंग गति को वृद्धि पनि धूलो झोला को लगाउन को लागि नेतृत्व गर्नेछ। जब झोला बिग्रन्छ, क्षतिग्रस्त ब्यागलाई जतिसक्दो चाँडो हटाउनुपर्नेछ र धुलो सor्कलकको त्वरित स्क्र्यापिंगबाट बच्न। जहाँसम्म, यदि धुलोको झोलामा केवल सानो प्वाल छ भने, तपाइँ पुरानो धूलो झोला पूरै बदल्नुको सट्टा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। जे होस्, यदि धुलो ब्याग ठूलो क्षेत्रमा बिग्रिएको छ भने, यो पूर्ण रूपमा बदल्नु पर्छ। डस्ट रिमूभरको लागि धुलो ब्यागलाई प्रतिस्थापन गर्दा, पहिला धुलो हटाउने उपकरणको सञ्चालन रोक्नुहोस्, त्यसपछि धुलो नियन्त्रणकर्तालाई बन्द गर्नुहोस् र धुलो ब्यागलाई पृथक गर्नुहोस्। धुलोको झोला बाहिर निकाल्दा पहिले झोलाको पिँडा बाहिर निकाल्नुहोस् र त्यसपछि धुलोको झोलाको मुखमा वसन्तको औंठी पिचोमा राख्नुहोस्, र बिग्रेको धुलो झोलालाई माथि माथि तान्नुहोस्।
नयाँ धुलोको झोला स्थापना गर्नु अघि फूलको प्वाल प्वालबाट खसेको धुलो सफा गर्नु आवश्यक छ, र नयाँ झोला स्थापना गर्नुहोस्। धुलो ब्याग स्थापना सबै लिंक का सब भन्दा सावधान र धैर्य अंग हो भन्न सकिन्छ। धुलो झोला राख्ने क्रममा, धुलो झोला र तीक्ष्ण वस्तुहरू पम्प नगर्नुहोस् वा स्क्र्याच नगर्नुहोस्। एक सानो स्क्र्याच पनि ब्यागको सेवा जीवन छोटो पार्नेछ। तसर्थ, डिडस्टि bag ब्याग स्थापना गर्दा, बक्सको फूल प्लेट प्वालबाट डिडस्टि bag झोला कोठामा पहिलो राख्नुहोस्, त्यसपछि डिभस्टि bag झोलाको ढोकामा वसन्तको औंठी चुम्किनुहोस् र यसलाई सावधानीपूर्वक राख्नुहोस्। बक्सको फूल प्लेट। त्यसपछि वसन्तको औंठी यसको मूल अवस्थामा फर्कनुहोस्, ताकि यो फूलको प्वालको परिधिमा कडा रूपमा जोड्न सकियोस्, र अन्तत: धुलो हटाउने कपडा झोलाको ढोकाबाट माथिल्लो भागको सुरक्षात्मक आवरणसम्म थैलीको पिचोलाई बिस्तारै छुराउँनुहोस्। झोला पिंजरा को बस बक्स बडी मा फूल प्लेट प्वाल प्वाल मा दबिएको छ।
सुरक्षा सुनिश्चित गर्न, अर्को एक स्थापना गर्नु अघि यसलाई एक डिस्टिष्टिंग ब्याग स्थापना गर्नु आवश्यक छ। माथिको छिटो धूलो हटाउने को लागी धूलो ब्याग परिवर्तन गर्न को लागी छ। म आशा गर्छु कि यसले तपाईलाई मद्दत गर्न सक्छ!
पोष्ट समय: फेब्रुअरी २ 23-२०२०
फ्यूम स्क्रबर, केन्द्रापसारक डक्ट फ्यान, उच्च दबाव केन्द्रापसारक फ्यान, एकल इनलेट केन्द्रापसारक फ्यान, रेडियल ब्लेड केन्द्रापसारक फ्यान, निकास फ्यान,